Cayaaryahan La Toogtay Oo Illaahay Ka Badbaadiyey Xabbad Gaadhigiisa Ka Dhex-baxday Oo Ka Sheekeeyey Sidii Wax U Dhaceen | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cayaaryahan La Toogtay Oo Illaahay Ka Badbaadiyey Xabbad Gaadhigiisa Ka Dhex-baxday Oo Ka Sheekeeyey Sidii Wax U Dhaceen
Published on November 14, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(15-11-2018) Kubadda cagta marar badan ayay ka dhacdaa in qaab shirqool ah loo dilo ciyaartooyo, waxaase inta badan dhacdooyinkan noocan ah laga arkaa dalalka qaaradda Latin America oo hore loogu dilay ciyaartooyo waaweyn.
Dhacdadii ugu dambaysay ayaa waxay kasoo baxday dalka Colombia oo lagu weeraray ciyaartoy sannadkii hore ka ciyaaray horyaalka dalka Spain ee LaLiga, laakiin dib ugu laabtay dalkiisa Colombia iyo kooxdiisii hore ee Deportivo Cali.
Laacibkan la wareeray oo lagu magacaabo Juan Sebstian Quintero oo ay da’diisu tahay 23 jir ayaa isaga oo wata gaadhsigiisa oo marayay badhtamaha magaalada Jamundi waxa kasoo hor-baxay nin cadhaysan oo ku hubaysan qori, kaas oo markiiba aflagaadooyin iyo cay adag ku hujuumay ka hor intii aanu soo roganin qoriga oo aanu si badheedh ah u tooganin.
Ninka cahdaysan oo aan sheegin sababta uu u dilayo, ayaa baas ku furay gaadhiga uu ku jiray Quintero, hase yeeshee Illaahay ayaa ka badbaadiyey, waxaana uu markaas si xawli ah u kexeeyey gaadhiga oo uu kaga badbaaday.
Quintero oo dhacdadan ka sheekeeyey ayaa waxa uu war geliyey ciidamada booliska oo markiiba ka hawlgalay, hase yeeshee ma jiro war ay illaa hadda kasoo saareen.
Laacibkan ayaa xili ciyaareedkii hore amaah ugu ciyaaray naadiga Sporting Gijon ee dalka Spain, wuxuuna dib ugu laabtay sannadkan kooxdiisii hore ee Deportivo Cali.